10 Jan, 2020 - 00:01	 2020-01-09T19:44:22+00:00 2020-01-10T00:00:25+00:00 0 Views
NYAYA yemajana (duty) ekuchenesa pamba pakati pemhuri mbiri dzinoroja pamwe chete mumusha weHighfield, muHarare, yakonzeresa bongozozo iro rakaita kuti vapedzisire vaendesana kumatare edzimhosva. Priscilla Zhou akamhan’arira Tatenda Pfumo kuHarare Civil Court achikumbira gwaro rerunyararo.
“Vanoburitsa zvinhu zvangu zvinenge zviri mukitchen vachikanda panze, handizive kuti sei vachidaro. Ndakambomhan’ara kumapurisa takagadziriswa asi vatanga futi,” anodaro Zhou. Anoti haachakwanisa kuita majanha ekuchenesa pavanogara sekugeza muchimbuzi nekuda kwekufurufushwa naPfumo.